ကျွန်တော် ဒီနေရာလေး မှာတော့သက်ဆိုင်ရာလေးတွေ ကို နည်းနည်းပြောပြချင်ပါတယ် ။ ကျွန်တော် အပေါ်မှာ ပြောသလိုပဲ့ ကျွန်တော်နီးစပ်ရာတွေကို ရှာမယ် ပီးရင် တကန့် ချင်းဆီမှ ရှာလို့ မတွေ့နိင်ဘူး မိမိ လိုချင်တာနဲ့ မကိုက်ဘူး ဖြစ်နေတယ် ဆိုရင် အပေါ်မှာပေးထားခဲ့တဲ့ ခေါင်းစဉ်အသစ်ဖွင့်ပြီး တောင်းဆိုခြင်း ကို သွားကြည့်ပေးပါ။အဲ့တာမှ မရှိဘူး ဆိုရင့်ခေါင်းစဉ် အသစ် ဖွင့်ပီး တောင်းဆိုနိင်ပါတယ်။ပီးရင် မေးမြန်းခြင်း အတက်ပညာကို သွားဖတ်ပေးပါ ဒါဆို မေးဖို့ မြန်းဖို့ အတွက် ကျွန်တော်တို့ နည်းနည်း နားလည်သွားလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ဆက်ဆက်ပီးပြောချင်တာလေးကတော့ . ကျွန်တော်တို့ တခုခုကိုသိချင်လို့ ရှိရင် မိမိကိုယ်တိုင် အားထည့်ကြိုးစားပီးနက်ပေါ်မှာ ရှာလို့လည်း ရနိင်ပေ့မယ် အဆင်မပြေမူတွေ များတာသိပါတယ် ။ဒါပေ့မယ် သိချင်တဲ့ အကြောင်းအရာနဲ့သတ်ဆိုင်တာကို မိမိ အနေနဲ့ အရင်ဆုံး လေ့လာကြည့်ထားပါ သက်ဆိုင်တဲ့ ကဏ္ဍလေးတွေ ကို တက်နိင်သလောက် လက်လှမ်းမှီသလောက်ဖတ်ထားပေးပါ။ ဒါမှ ကိုယ်သိချင်တာကို ဖြေပေးတဲ့ချိန်ကြရင် ဖတ်ထားတဲ့ အားနဲ့ ပေါင်းစပ်ပီး သေချာသိသွားမှာပါ မိမိ လေ့လာ အားထည့်လိုက်တဲ့တွက် ပိုပြည့်စုံသွားတယ်လို့ ဆိုချင်တာပါ။
မိမိ ကိုယ်တိုင်က လည်း သိချင်တဲ့ အကြောင်းအရာကို လေ့လာစေချင်ပါတယ် မလေ့လာဘဲ့ မေးတဲ့ချိန်မှာ အဖြေတွေကို နားမလည်မူတွေ ထပ်ပီး နားမလည် ပဲ့ ယောင်ဝါးဝါး ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် ။ အဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့ တက်နိင်သလောက်လေး သိသင့်တာလေးတွေကို လေ့လာထားပေးပါ။
ဒါကတော့ ဖိုရမ်ဝင်သူတိုင်း အကောင့် ဖောက်ပီးမှ PAssword မေ့သွားသူတွေ အတွက် အကြောင်းလေးကို ကိုကေဇတ် ပြောခဲ့ပီပါပီ။ ဒီနေရာလေး ကို သွားကြည့်ပေးပါ။ အကောင့် ဖောက်လို့ မရလို့ ဖြစ်နေတဲ့ အခက်ခဲ့တခုကိုလည်း ပြေလည်အောင် ကိုကြီးရဲ့အောင် ပြန်လုပ်ပေးထားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဖိုရမ်ကို စရောက်လာပီ ဒါဆို ကျွန်တော်တို့ ပိုစ်တင်တက်အောင် ကြိုးစားကြည့်ရအောင် ..ကျွန်တော်တို့ တင်ချင်တဲ့ အကြောင်းအရာတခုခုကို အရင်ဆုံး word မှာ စာစီ လိုက်ပါမယ် ဒါမှ မဟုတ် မိမိ အဆင်ပြေရာနေရာ တခုခုပေါ့။။ ကျွန်တော်တို့ တင်မဲ့ ပို့စ်က ပြန်စာ ပို့စ်မျိုး ဆိုရင် Reply ကိုနိပ်ပီး မိမိ အဆင်ပြေရာနေရာမှာရေးလာတဲ့ စာကို Paste ပေးလိုက်ယုံပါပဲ။ ပီးတော့ ဆွေးနွေးချက်အားတင်မည်ပေ့ါ။ဒါမှ မဟုတ်ဘူး အသစ်တင်မယ်ဆိုရင် သက်ဆိုင်ရာ လိုက် ခေါင်းစဉ်ကြီးတွေ အောက်မှာ New Topic ဆိုပီး ရှိပါတယ် အဲ့ ခလုပ်လေးကို နိပ်ပီး အသစ် ဖွင့်နိင်ပါတယ်။ အသေးစိတ် ထက်ပီးတော့ ပူံတွေ နဲ့ ပြပါ့မယ်။
အကျယ်တ၀င့်ရေးမယ်ကို နိပ်ပီး တော့ နမူနာတွေ တင်ထားတဲ့ ပုံတွေ ကြည့်မယ် ပုံတွေ ပါထည့်ဖို့ကို လုပ်ဆောင်နိင်ပါတယ်။ www.youtube.com တို့ ။ Ebook ထည့်လို့ ရပါတယ် ဒီနေရာလေးမှာတော့ ပုံတင်တာ မတင်တက်သေးသူတွေ တွက်မို့ www.youtube.com ကို ဘယ်လို့ ထည့်လည်းဆိုတာ လင့်ပဲ့ ပြန်ညွှန်းလိုက်ပါတယ်။ အကျယ်တ၀င့်ရေးမယ်ကိုနိပ်လိုက်ပါ .. ဒီအပိုင်းကို ပုံနဲ့ ပြပေးပါမယ်။ အောက်မှာကြည့်လိုက်ပါ Html နားလည်သူ ကျွမ်းကျင်သူဆိုရင်တော့ ဒီအပိုင်းတွေ သိပေ့မယ် Html ကို နားမလည်သေးသူတွေတွက် အခက်ခဲ့ ဖြစ်နိင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် နည်းနည်း ရှင်းပြကြည့်ပါမယ်.။
ဒီနေရာလေး မှာတော့ B ဆိုတာလေးက နေ နောက်ပိုင်းကို တဖြည်းဖြည်း တဆင့်ချင်းဆီပြောသွားချင်ပါတယ်။
B = ဆိုတာ မိမိ စာသားကို ဒီလို အရောင် ရင်ပီး Bold တင်လိုက်တာကို ဆိုတာပါ ။
I= ဆိုတာ မိမိ စာသားလေးတွေ ကို တစောင်းလေး နည်းနည်းစောင်းသွားအောင် လုပ်တဲ့ Italic ကို ဆိုလိုတာပါ။
U= ဆိုတာ မိမိ စာသားကို အောက်မှာ လိုင်းတာချင်တာပါ။ Under ကိုဆိုလိုတာပါ။
ကျွန်တေ်ာတို့ B. I.U လုပ်ချင်တာကို Select လုပ်ပီး ရွေးလည်းရသလို့ အရင် ဆုံးမိမိ B. I.U လုပ်ချင်တာကိုရွေးပီးမှာ အဲ့ကြားတည်းမှာ ထည့်မယ်ဆိုလည်းရပါတယ်။
အဲ့အပေါ်က မိမိ ရေးထားတဲ့ စာပိုဒ်ကို ညှိတာပါ .. အရှေ့ ဆုံးမှာ ထားချင်တာ အလယ်မှာ ထားချင်တာ နောက်ဆုံးမှာ ထားချင်တာကိုရွေးတာပါ။
ဒါကတော့ ဒီလင့် ကို သွားပါဆိုပီး ညွှန်းတာမျိုးပါ မိမိ ညွန်းဖို့( ဥပမာ ဒီလင့် ) လို ညွှန်းထားတာလေးကို Select ရွေးပီးတော့ လင့် ထည့်တာ လင့် ပြန်ဖျက်တာ မျိုးနေရာမှာ သုံးတာပါ။ တခြား ဆိုဒ်က လင့်မျိုးလေး ကိုပြန်ညွှန်းတာပါ။ဘေးနားနောက်ဆုံးနားက ၃ ခုမြောက်က Email. ထည့်ပေးတာပါ။
ပုံထည့်တာလေးကတော့ ခဏခဏမေးတာကိုတွေ့နေ မြင်နေရပါတယ် ဘယ်လို ထည့်လည်းဆိုတာလေးကို နဲနဲပြောပြပါမယ်။ အရင်ဆုံး ကျွန်တော်တို့ တင်ချင်တဲ့ ပုံကို image hosting တခုခုမှာ သွားတင်ရပါတယ် ဥပမာ အောက်က ဆိုဒ်တွေ ထဲ့ က တဆိုဒ်ဆိုဒ်မှာ သွားတင်နိင်ပါတယ် မိမိ တင်ချင်တဲ့ ပုံကို သွားတင်ပီး ရလာမယ့်URL ကို ယူလာခဲ့ပေးပါ။
အဲ့ဆိုဒ်တွေမှာ ပုံတင်ပီးရင် လင့် တွေ ပြန်ပေးပါတယ် ။ ပုံ လင့်ကို ယူလာပါ ပီးရင် အောက်က ပုံလေးကို နိပ်ပီး ယူလာတဲ့ လင့်ကိုထည့်ပေးလိုက်ယုံပါပဲ။
ပုံလင့်က ဒီလို ပုံစံမျိုးပါ ။( http://img220.imageshack.us/img220/3553/49505493.png) အဲ့လင့်မျိုး ထည့်ရမှာပါ။
နောက်ထက် အပိုင်းတွေ ကို
[code] တွေ နဲ့ Youtube . Table.
ကျွန်တော် က ဆက်ဆက်ပီး နည်း အာရှည်ပီးပြောလိုက်တာ မလို့ ပါ ဒီအကြောင်းအရာတွေ ကို ပိုပီး ပြီးပြည့်စုံအောင် သိချင်တယ် ဆိုရင် ကိုကေဇတ် ရေးထားတဲ့ ဒီလင့်မှာ မဖြစ်မနေ လာကြည့်ပေးပါ။
အကုန်လုံး သဘောတရားတူတူပါပဲ့ ။ ပုံထည့်တာ နဲ့ ပိုစ်တစ်ပိုစ် ဘယ်လိုတင်တယ် ဆိုတာကို နည်းနည်းလေးအားထည့်ပီးပြောတာမလို့ .. လိုအပ်တာများ ကို တက်နိင်သလောက် အသေးစိတ် ထပ်ပြောပြနိင်ဖို့ ကြိုးစားလျှက် ကျေးဇူးတင်စကားပြောဖို့ ရာဝယ်ဆိုတာလေးကိုလည်း သွားရောက်ဖတ်ရူပေးပါဦး
် မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်မှ ညီအကိုမောင်နှမများ...
အားလုံးပဲ့ ကျန်းမာ ချမ်းသာပါစေ…
Last edited by သန့်ဇင်ဌေး; 26-02-2011 at 03:24 PM..
ချစ်သမီး, ငှက်ကြီး, စန်းမြို့, တီဘွား, ဒီဝန်းအိမ်, ဖိုးတာတေ, ယွန်းယွန်း, လွမ်းဆု, သက်တန့်, ဟန်မိုးလွင်, ဇော်ရဲပိုင်, နေမင်းမောင်, မေမင်းဆက်(ပုသိမ်မြေ), မေဦးမွန်, မောင်သံသရာ, မောင်ပေါ်ဦး, မောင်အောင်ဟိန်းအေး, မွေဖု, ခြူးလေး, arkaraung, aungphyo, bagothar85, bonge, g00gle, htun30, KznT, minthike, minthumon, mjkomg012@gmail.com, moe san dar, schweinsteiger, Touttalwae42@gmail.com, tu tu, yelinoo, zin min aung, zo